OCEANAIRE UBUNDOQO BUKACONDO PHAMBILI
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguOceanaire Luxury
Igumbi lokulala eli-2, lifakwe ngokupheleleyo ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye nebhafu enye. Indawo yethu ilungile kundwendwe olu-4. Ibekwe kanye kwi-yhe beach, sinikezela ngamagumbi anemibono yolwandle kunye nemibono yeentaba! Umgangatho othandekayo womgangatho ojonge kulwandle lwaseChina.
Indawo yokuhlala ikwindlela ebethiweyo kwaye isekufutshane nayo yonke into! Indawo egqibeleleyo enegaraji yokupaka kunye nokhuseleko lwesango kunye nonogada osemsebenzini. Izinyuko ezingama-20 ukuya elunxwemeni! Kufuphi neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezinesidlo esikhulu okanye uhlale ekhaya kwaye uziphekele.
4.54 ·Izimvo eziyi-60
4.54 out of 5 stars from 60 reviews
4.54 · Izimvo eziyi-60
Umbuki zindwendwe ngu- Oceanaire Luxury
Umamkeli ofumaneka ngefowuni 24hrs ngosuku kwaye uhlala 10 mins ukusuka kwipropati. Ukugada emsebenzini 24/7